Maxay tahay sababta uu Memphis Depay u neceb yahay inuu isticmaalo magaca ‘Depay’ isla markaasna maaliyadda ugu qorto kaliya ‘Memphis’? – Gool FM
(Amsterdam) 20 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xalay si rasmi ah ugu dhowaaqday saxiixa xiddiga weerarka ka ciyaara ee Memphis Depay kaasoo bilaash kaga soo dhaqaaqaya naadiga Lyon, balse qoraalkan waxaan idin kula wadaageynaa isagoo sharraxaya sababta uusan u jecleyn in loogu yeero Depay ama uu maaliyadda ku qorto.
Weeraryahanka xulka qaranka Netherlands ayaa sanadkii 2012 go’aansaday inuu dhabarka maaliyaddiisa ku qorto magaciisa Memphis oo qura isla markaasna uu iska fogeeyo inuu dhabarka ku sito magaca qoyska uu kasoo jeedo ee reer Depay.
Xiddigan ayaa arrintaas ku sababeeyay inuusan dooneyn inuu muujiyo xiriirka kala dhexeeya qoyska reer aabbihii kaddib kala tag ku yimid Memphis oo caruur ah iyo Dennis Depay oo ah aabbihii dhalay, waxaana laacibka cusub ee Barca uu go’aansaday inuusan isticmaalin magaca qof isagoo oo afar jir ah isaga tagay ama iska fogeeyay.
“Marnaba ma cafin doono” ayuu Memphis u sheegay BBC.
“Ha iigu yeerin Depay, iigu yeer Memphis.
“Ma rabo inaan si sax ah u wada sharraxo wixii ka dhacay guriga, sababtoo ah ma rabo inaan dadka ka xishoodsiiyo, sidaas ayayna ahaan doontaa maxaa yeellay hore ayaan ugu dhaqaaqay” ayuu hadalkiisa ku daray 27-sano jirkaan.
Si kastaba ha ahaatee, dhabarka maaliyadda Barcelona ayaa sidii caadiga u ahayd xiddigan lagu arki doonaa magaca Memphis oo qura isagoo Camp Nou kooxda ku ciyaarta la galay heshiis dhici doona xagaaga 2023.
Manchester City oo go'aan ka qaadatay u dhaqaaqista saxiixa Harry Kane